(၆)လအတွင်း IELTS စာမေးပွဲအတွက် ဘာတွေဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ ? – For her myanmar
Posted on May 31, 2019 Author Stella	Comment(0)
IELTS ဆိုတာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်ချင်တဲ့သူတွေ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းလိုချင်တဲ့သူတွေ မဖြစ်မနေဖြေဆိုရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဆိုတာ ယောင်းတို့သိပြီးကြမှာပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံထားတဲ့ စာမေးပွဲကြီးဆိုတဲ့အတိုင်း နှစ်စဉ်ဖြေဆိုသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကောင်းပြီးသားသူတွေအတွက် မခက်ခဲဘူးဆိုပေမဲ့ IELTS မှာလည်း သူ့ရဲ့အငိုက်ဖမ်းတတ်တဲ့အကွက်လေးတွေ ရှိနေပြန်ရော … ဆိုတော့ IELTS အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ ?
IELTS စာမေးပွဲဖြေတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး စာလေ့လာချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ဖို့ပါ။ ယောင်းက intermediate level ဆိုရင် အချိန် (၃)လဝန်းကျင်နဲ့ လုံလောက်ပေမဲ့ Beginner level၊ အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် self-study လုပ်ပြီးလေ့လာမယ့်သူဆိုရင်တော့ (၆) လလောက် အချိန်ယူတာ စိတ်အချရဆုံးပါပဲ။
Reading က IELTS ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေတဲ့အခါ စာပိုဒ်တွေဖတ်ပြီး မေးခွန်းအခု (၄၀) ကိုဖြေဖို့ အချိန်တစ်နာရီရပါမယ်။ အဓိကက စာပိုဒ်တွေကို မြန်မြန်ဖတ်ပြီး အဖြေတွေကို တိတိကျကျဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့ပါ။ မေးခွန်းအခု (၄၀) တောင်ဆိုတော့ မေးခွန်းတစ်ခုထဲမှာပဲ အကြာကြီးအချိန်မဖြုန်းဘဲ တစ်နာရီအတွင်းမှာ မေးခွန်းစေ့ဖြေနိုင်အောင် Timer ပေးပြီး လေ့ကျင့်ထားရပါမယ်။
Related article >>> IELTS အမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေ ရနိုင်သလဲ ?
နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ Writing ပါ။ Essay (သို့) Letter ကို သူပေးထားတဲ့စာလုံးရေအလိုက် ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် သဒ္ဒါမှန်မှန်ရေးတတ်စေဖို့ လေ့ကျင့်ရပါမယ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲ ဗဟိုပြုပြီး ဝါကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ရေးတာက အမှတ်ပိုရစေပါတယ်။ ဒါတွေကို (၅၅) မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ အပြီးရေးပြီး နောက်ငါးမိနစ်ကိုတော့ ပြန်စစ်ဖို့အချိန်ပေးတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ပါ။
Listening ကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့စာလုံးတွေက သံတူကြောင်းကွဲလေးတွေမို့ အာရုံစိုက်ပြီး နားထောင်တတ်ဖို့ လိုတဲ့အပြင် တစ်လုံးတစ်လေလွတ်သွားတာနဲ့ အမှတ်က ကွာခြားသွားနိုင်တာကြောင့် သတိထားပေးပါ။ Listening စွမ်းရည်တိုးတက်ချင်ရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောရုပ်ရှင်တွေကို စာတန်းထိုးမပါဘဲ မကြာခဏကြည့်ပေးတာက ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
Related article >>> အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်လာအောင် လေ့လာနိုင်မယ့် YouTube Channel (၅) ခု
Stella တို့တွေက မြန်မာပြည်မှာ ငါးပိစားပြီး ကြီးလာတဲ့သူတွေဆိုတော့ တကယ့် native speaker တွေလို ပီပီသသပြောနိုင်ဖို့က ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ “Practice makes perfect” ပါ။ အိမ်မှာ အလကားနေရင်း မှန်ရှေ့သွားပြီး အခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ စကားလက်ဆုံကျနေသလို ပြောကြည့်ပါ။ နောက်မှတစ်ဆင့်တက်ပြီး ကိုယ့်ဘေးနားကလူတွေနဲ့ နည်းနည်းပါးပါးပြောကြည့်ပါ။ အရေးကြီးတာက ကိုယ်က သင်ယူနေတဲ့သူဖြစ်လို့ မရှက်ပါနဲ့။ ပညာရှာပမာ သူဖုန်းစားတဲ့။
ကိုယ်က သင်တန်းတွေတက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် အိမ်မှာတင် သင်ယူလို့ရပါတယ်။ အားတဲ့အချိန် အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတဲ့ YouTube video တွေကြည့်ပါ။ IELTS နဲ့ပက်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်ပါ။ သံရုံးတွေမှာ စာအုပ်တွေငှားလို့ရသလို မေးခွန်းဟောင်းတွေလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာရော၊ ပညာရေးမှာပါ IELTS အမှတ်က အရမ်းစကားပြောတာမို့ ကျောင်းကောင်းကောင်းတက်ချင်သူ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ လိုချင်သူတွေအနေနဲ့ IELTS အမှတ် အနည်းဆုံး ၆.၅ လောက်ရထားမှသာ အဆင်ပြေမှာပါ။ အခု Stella ဝေမျှပေးလိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ (၆)လအတွင်း IELTS စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နိုင်တာကြောင့် ယောင်းတို့အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော် …
Tagged class, English, Exam, ielts, language, learning, Preparation, self study
Posted on January 11, 2019 January 11, 2019 Author Myat Moe
Posted on December 14, 2018 December 14, 2018 Author Myat Moe
ဘာလဲ Collocations ဆိုရင်တော့… ယောင်းတို့သိပြီးသားတွေပါပဲလို့… 😛
အွန်လိုင်းသုံးပြီး အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြမယ်
Posted on January 18, 2019 Author Myat Moe
ပိုက်ဆံကုန်လည်းသက်သာ အချိန်လည်းသိပ်မကုန် လူလည်း မပင်မပန်းဘဲ အင်္ဂလိပ်စာစကေးတွေလည်း တက်လာမှာနော်